Mazororo echando | Vacation Vacations Travel | Mapeji evaravara ehurukuro
Ita mazororo ezhizha nguva inofadza
Kufara hakufaniri kuregererwa
Kuramba uchikurukura neshamwari dzekuchikoro munguva dzezororo
Mazororo ezhizha ari kuuya. Izvi zvinoita kuti mwoyo wevadzidzi vose urove nekukurumidza, sezvo zororo rezhizha rakakurumbira, sezvo iyi yezororo refu iri nguva yakanaka yevana vakawanda. Zvechokwadi, zororo rezhizha rakanaka pakuita zvirongwa zvezvinhu zvakasiyana-siyana zvokuita.
Zvaunofanira kuita mumazororo ezhizha
Sezvo mazororo ezhizha apera kwemavhiki mashomanana, pane nguva inopfuura nguva yakakwana yekuenda kune dzimwe nzvimbo kana kutora holide kune rimwe guta kana nyika. Kune nzira dzakawanda dzokuita mazororo ezhizha nguva yakakosha.
Zuva rezororo mumazororo ezhizha
Vabereki vanogona kuuya nezvinhu zvakasiyana-siyana kuvabatsira kugadzira nguva iyi. Vana vari kutarisira kuuya kwezororo rinokosha gore negore. Nokuda kwechikonzero ichi, vabereki vanogona kuita kuti vana vavo vafare pavanenge vaine chokwadi chekuti nguva yezororo yevana inova nguva isingakanganwiki.
Mazororo ezhizha anokosha kune vana
Kutarisira kwemazororo ezhizha kunotanga nevadzidzi vakawanda masvondo mashomanana vasati vapera mazororo, nokuti vana, mazororo aya kazhinji nguva yakanaka. Kutanga uye zvakanakisisa, awa mazororo mashoma anoreva vana kuti havafaniri kuenda kuchikoro uye vane mukana wekurara zvakanaka kwenguva yakareba kana kuramba vakamuka manheru.
Munguva dzezororo zhizha, vana vane mukana wekukanganwa kushungurudzika kwechikoro kwekanguva, nokuti munguva yezororo kune mukana wekudzoka kubva kuchikoro uye kudzidzira kushungurudzika. Iye zvino, chokwadi, mubvunzo unomuka wekuti zvinokwanisika sei kuita mazororo ezhizha nguva yakakosha. Kune nzira dzakawanda dzekuzadzisa chinangwa ichi.
Vana vanogona kuita zvakawanda munguva dzezororo. Nguva inopisa inobvumira zvinhu zvakawanda. Somuenzaniso, vana vanogona kuenda kunze kunotamba ikoko. Vana vazhinji vanoshandisa mazororo ezhizha kuti vazvipire ivo pachavo maitiro avo. Mukuwedzera, mazororo anopa nguva yakakodzera yekutanga chido chekuita.
Mitambo iyiwo mukana mukuru kune vakawanda mwana panguva yezororo yavo muzhizha. Mhuri dzinogonawo kushandisa mazororo ezhizha kuti dzifambe kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana, kuitira kuti kushandisa zvakanaka nguva yezororo, nokuti pane rwendo nevemumhuri, nhengo dzemhuri dzose dzinogona kuva nekunakidzwa kukuru.
Shandisa iyo yakanaka yehuzha yehusiku nokuda kwekufamba nemhuri
Muzhizha, nekuda kwekunaka kwemamiriro okunze, kazhinji zvinogoneka kutora marwendo nemhuri yose, apo mhuri inogona kunakidzwa nayo. Mazororo ezhizha anogona kushandiswa kuronga mafurati akasiyana-siyana, sezvo mazororo anogona kukurumidza kuve asina kunaka kana pasina zvirongwa zvezviitiko munguva yezororo zvakagadzirwa.
Mazororo ezhizha anosanganisira mavhiki mashoma umo mhuri inogona kuita maitiro kune nzvimbo dzakasiyana. Somuenzaniso, kune mukana wekushanyira zoo, kuenda kudziva rekushambira, kupedza nguva imwe kunze kana kuronga kushanyira pikicha huru. Saka kune mikana yakawanda yekufambisa iyo mhuri inogona kufunga panguva dzezororo zhizha. Kunze kwekufamba kwemasikati, mazororo munguva yezhizha zvakare inofanirwa kwezororo refu, uko mhuri yose inogona kusununguka.
Mhuri dzakawanda dzinoshandisa mazororo ezhizha kuti uende kuzororo. Iko kunofanirwa kugadzirirwa kurongwa kwemazororo, saka izvi ndezvechikonzero chakakosha chekufara kwevana, nokuti zororo rinowanzobatanidzwa nezviitiko zvakawanda zvakasiyana.
Imba yezororo munguva dzezororo dzezhizha ndeyekusimbiswa kwakakwana kwevana vakawanda sezvavanokwanisa kuita zvinhu zvakawanda panguva yezororo. Semuenzaniso, vana vanogona kupedza nguva pahotera yekushambira hotele. Asi holide inogona kushandiswawo kuita mafurati, nokuti mune imwe nyika, kune nzvimbo dzakawanda dzinogona kuwana mhuri.
Zvechokwadi kunewo mhuri dzine zvikonzero zvakasiyana-siyana mukati mezororo ezhizha hazvigoni kutora zororo uye kungofamba zvishoma. Muchiitiko ichi, vana vanogona kushandisa nguva yekudzidza kuitira kuti vagadzirire zvakanaka kutanga kwechikoro mushure mezororo.
Mazororo ezhizha anowedzera kwenguva yakareba. Sezvo zvinogona kuitika nokukurumidza kuti vana vanokanganwa zvigadzirwa zvechikoro uye saka vane matambudziko apo chikoro chinotangazve shure kwemazororo.
Mwana ane hanya nemhuri yezororo munguva dzezororo zhizha
Ichokwadi kuti hazvina kunaka kuti vana vadzidze chimwe chinhu mumazororo ezhizha, kuitira kuti zvinhu izvo vana vanodzidze panguva dzezvidzidzo hazvikanganwiki. Saka, zvinokurudzirwa kuti vana vatore mabhuku echikoro nguva nenguva kuti vaverenge mumazororo.
Vabereki vane mukana wekubatsira vana vavo nekuvabatsira kudzidza pazororo. Zvisinei, mazororo acho anonyanya kupera kubva kuchikoro nguva, naizvozvo, kunakidzwa mumazororo ezhizha hakufaniri kuregererwa. Mushure mezvose, munhu wose muhupenyu hwehupenyu hwake anongowanikwa kazhinji kuti afarire mazororo ezhizha.
Pane nzira dzakawanda dzokuita kuti mazororo ezhizha anakidze vana. Hazvisi zvachose kutora rwendo rwezuva kana kuti hovha kuti upe vana vana mamwe mafaro munguva dzezororo.
Mhuri dzinogonawo kushanda pamwe chete pamba pamakambani anobatanidzwa anogona kushandiswa kugadzira holide.
Somuenzaniso, vabereki vanogona kutamba mitambo nevana vavo munguva dzezororo. Mhuri dzakawanda dzinoshandisa nguva dzezororo dzekuzorora kupedza nguva pamwe chete. Vana vanewo mukana wokusangana neshamwari kubva kuchikoro panguva dzezororo.
Mwana mumwe nomumwe ane zvirongwa zvakasiyana kwazvo zvemazororo ezhizha. Nokudaro zvinogona kuitika kuti vaunodzidza navo havakwanise kuona mumwe nomumwe panguva dzezororo. Ruzhinji rwevana rinonyanya kukoshesa kuona shamwari dzavo munguva dzezororo. Kunyanya munguva refu mazororo ehizha, zvinokwanisika kuti vana vanoshuva shamwari dzavo kubva kuchikoro.
Kana izvi zvikaitika, pane mukana wekuti vana vachaita musangano wekutamba, nokuti zvirokwazvo, vadzidzi vekuchikoro vanogonawo kutarisana panguva dzezororo uye kupedza nguva pamwe chete.
Pasinei nokuti zvinhu zvakarongwa sei pamazororo ezhizha, vabereki vanogona kubatsira vana vavo kuita mazororo nguva yakanaka nekubvumira vana vavo kuti vave semwana pavanenge vachizorora.
Kambi | Holiday holidays
Mupaki yekunakidza nemhuri Holiday holidays